Valencia dia mahazo fiara elektrika vaovao ho an'ny fiaramanidina | Fanavaozana maintso
Valencia dia mahazo fiara elektrika vaovao ho an'ny fiaramanidina
Portillo Alemanina | | LPG, Fiara elektrika
Fiara elektrika dia fitaovam-piadiana tsara hampihenana ny fahalotoan'ny tanàna tompon'andraikitra amin'ny fitaterana. Araka izany, Fiara elektrika vaovao 18 no nampiana an-tsambo ny fitaterana any Valencia.
Te hahafantatra ny tombony azo amin'ny fiara elektrika ve ianao sy ny fomba nitomboan'izy ireo tato anatin'ny taona vitsivitsy?
1 Fiara elektrika vaovao any Valencia
2 Fanavaozana sy faharetana bebe kokoa
Fiara elektrika vaovao any Valencia
Ny mpanolotsaina ny Cycle Integral Water, Vicent Sarrià, ny CEO an'ny Global Omnium, Dionisio García Comín, ary ny tale jeneralin'ny IVACE, Julia Company, dia nandray anjara tamin'ny fampisehoana ireo fiara vaovao ekolojika izay hampiasain'ny orinasa ao an-tanànan'i Valencia.
Ireo dia maodely vaovao an'ny Fiara herinaratra 100% izay manome ny faharetana sy ny fanajana ny tontolo iainana ilain'ny atmosfera.
Betsaka ny olona maty isan-taona ilain'ny fahalotoan'ny rivotra amin'ny tanàna noho ny fifamoivoizana sy ny indostria. Manomboka miadana ny fiovan'ny fiara elektrika, saingy sarotra ny fampidirana azy amin'ny tanàn-dehibe.
Ireo modely nampidirina tao Valencia dia Renault Kangoo ZE sy Zoe ary ny fizakan-tenany dia 240 sy 400 kilometatra, tsirairay avy.
Ho an'ny fampandehanana marina sy ny fanamorana ny fampiasana ireo fiara ireo dia teboka miisa 26 no napetraka eo afovoan'ny Vara de Quart avy amin'ireo orinasa Emivasa sy Global Omnium. Midika izany fa mety hitombo hatrany ny fiaramanidin'ny herinaratra mandritra ny taona ho avy.
Ilaina ny fampitomboana ny isan'ny fiara elektrika raha te hampihena ny entona mandoto isika. Eo an-tanantsika ny fahasalaman'ny rehetra, na dia asa sarotra sy be laza aza izany.
Ny fiovan'ny toetrandro, araka ny fantatsika, dia zava-misy izay misy fiatraikany amin'ny rehetra manerantany ka hatramin'ny eo an-toerana. Noho izany, Global Omnium dia mikasa ny handray anjara amin'ny vahaolana amin'ity toe-javatra ity izay mety hisy fiatraikany amin'ny fomba fiainantsika sy ny loharanon'ny rano.
Dionisio García dia nanamafy ity manaraka ity:
"Noporofoinay hatrany fa orinasa mifandraika amin'ny fiarahamonina izahay, ary ahoana no hitranga raha tsy izany, manohy manolotra vahaolana izahay izay manampy amin'ny fiadanan'izy ireo ary ny fampiasana fiara ekolojika no iray amin'izany".
Mba hampihenana ny vokatry ny fandotoana sy ny fiovan'ny toetr'andro, ny fahazoana ireo fiara ireo mivezivezy dia hampihena ny famoahana CO30 mahery mihoatra ny 2 taonina mankany amin'ny habakabaka, iray amin'ny entona manampy betsaka amin'ny fiakaran'ny hafanan'ny tany.
Ity fanapaha-kevitra ity dia noho ny paikadin'ny orinasa izay ny tanjona dia ny fanoloana tsikelikely ireo fiara diesel sy lasantsy miaraka amin'ireo maharitra kokoa izay mandray anjara amin'ny fiarovana ny tontolo iainana.
Fanavaozana sy faharetana bebe kokoa
Global Omnium dia mampiditra ny haitao vaovao amin'ny karazana fiara ekolojika izay tsy mampihena ny zava-bita fa mandray anjara amin'ny fitehirizana ny tontolo iainana ao amin'ny fiarahamonina mizaka tenan'i Valencia.
Hatreto, Fiara ekolojika 33 no natambatra (LPG 13 sy herinaratra 20), kasaina hampidirina 15 hafa amin'ny taona ho avy (4 LPG, 7 herinaratra ary hybrida 4). Mampitombo ny faharetana ity hetsika ity ary miantoka ny kalitaon'ny tontolo iainana amin'ny taranaka ho avy, satria mihena ny loto amin'ny atmosfera.
Ho an'ity karazana fampandrosoana teknolojia ity dia i Valencia no ivon-toerany. Ny fandraisana ny fiara elektrika any Valencia dia manampy ny fahombiazan'ny teknolojia izay tratra tato anatin'ny taona vitsivitsy. Izany no mahatonga an'i Valencia ny renivohitra voalohany izay manolo-tena amin'ny faharetana amin'ny fivezivezena amin'ny arabe.
Fampahalalana iray manohana an'ity zava-bita ity dia ny fanekena ny tatitra momba ny Fanavaozana sy ny Tanàna, navoakan'ny Centre For An Urban Future (CUF) sy ny Wagner Innovation Labs, an'ny NYU Robert F. Wagner Graduate School of Public Service, New York , izay misy ny famakiana lavitra ny metatra maranitra novolavolain'ny Global Omnium, tao an-tanànan'i Valencia, dia niavaka tamin'ny iray amin'ireo fanavaozana 15 lehibe indrindra manerantany natao tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Araka ny hitanao dia miha manakaiky ny fiakaran'ny fiaran'ny herinaratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Teknolojia vaovao » Fiara elektrika » Valencia dia mahazo fiara elektrika vaovao ho an'ny fiaramanidina
Etazonia sy Shina mpitarika tanteraka amin'ny angovo rivotra